Ungakulawula kanjani ukukhathazeka ngokudla | Bezzia
Ungakulawula kanjani ukukhathazeka ngokudla
UToñy Torres | 07/06/2021 14:00 | Ukwehla kwesisindo, Amathiphu ezempilo
Ukulawula ukukhathazeka ngokudla ukukhathazeka okwabiwe ngabaningi nabaningi. Njengoba, akunzima kangako ukuzidlela okungcono ngokwako, njengokugwema ukudla ngokweqile kanye nesidingo sokufaka okuthile emlonyeni wakho. Okuthile okungenampilo futhi izaba eziphelele zokona konke ukuzidela okwenziwe Kuze kube manje. Kungenxa yokuthi usanda kuqala ukudla, ngoba unezinkinga zomsebenzi noma zomuntu siqu noma ngabe yisiphi isizathu.
Uma unokukhathazeka ngokudla futhi uyakwazi, into ebaluleke kakhulu, lesi yisikhathi esihle sokuthola izeluleko ezizokusiza ukunqoba leso sidingo esiphuthumayo sokudla okuthile okungafanele. Ngokuyinhloko ngoba uma uvumela ukukhathazeka kukunqobe, isidlo esincane phakathi kokudla singaphenduka ukuzitika ngocansi. Okuzoholela ekutheni ulahlekelwe ngumdlandla nomdlandla.
1 Ukukhathazeka ukudla Ungakugwema kanjani?
1.1 Ukudla okuncane okuncane usuku lonke
1.2 Ukhukhamba kuviniga ukusika phakathi kokudla
1.3 Ushokoledi onokuqukethwe okuphezulu kokhokho
1.4 Hlala u-hydrated kahle
1.5 Lala kahle
2 Sebenza amandla akho okulawula ukukhathazeka ngokudla
Ukukhathazeka ukudla Ungakugwema kanjani?
Kubaluleke kakhulu ukuthi wazi ukuthi udla ngaphandle kokukhathazeka hhayi ukwanelisa isidingo esingokwenyama. Ngoba kulapho kuphela lapho uzokwazi ukubeka ikhambi elisebenzayo ngesikhathi esifanele. Uma ufuna ukwazi ukuthi ungalawula kanjani ukukhathazeka ukudla, ungaphuthelwa izeluleko ezilandelayo.
Ukudla okuncane okuncane usuku lonke
Ukuthi ukudla izikhathi eziningana ngosuku kukusiza wehlise isisindo kuyinto efakazelwe. Kepha hhayi lokho kuphela, ukudla okuthile njalo emahoreni ama-3 kukusiza ukulawula ukukhathazeka okudliwayo. Ngakho-ke, ugcina umzimba wakho usuthi kahle, unamandla okuhamba usuku futhi ugwema ukufika esidlweni esilandelayo unesifiso esikhulu sokudla. Vele, kufanele ngaso sonke isikhathi balawulwe izabelo, ibhulakufesi eliphelele kakhulu nelantshi, isidlo sasebusuku esilula kanye nokudla okulula okumbili noma okuthathu phakathi kokudla.
Ukhukhamba kuviniga ukusika phakathi kokudla
Amakhukhamba anjengamakhukhamba kuviniga, amakhekhe, izaqathe noma iminqumo, alungele ukudla okulula phakathi kokudla ngenxa yokuqukethwe kwawo kwekhalori eliphansi. Phakathi ntambama noma ngaphambi kokudla, kungaba ukuqala okuhle okuzokusiza ukunciphisa isifiso sakho sokudla. Ngaphezu kwalokho, uviniga usiza ukunciphisa ukucasuka kwesisu, okuvame kakhulu lapho uqala ushintsho ekudleni.
Ushokoledi onokuqukethwe okuphezulu kokhokho
Enye yezinkinga ezinkulu zokuphatha ukukhathazeka ukudla ukuthi ujwayele ukuhalela okuthile okumnandi, okungenampilo, futhi okunama-calories aphezulu. Noma kunjalo, ungakhetha izinketho ezinempilo ezifana noshokoledi omnyamaYebo, ngephesenti le-cocoa eliphakeme kune-75%. Njengoba kubaba kakhulu, kunzima ukuzizwa ngathi unezinhlamvu ezingaphezu kweyodwa noma ezimbili.
Hlala u-hydrated kahle
Ezimweni eziningi, indlala ididaniswa nokoma, okungaholela ekutheni udle ngokuxhamazela ngaphandle kokuthi ulambile empeleni. Ukugwema lokhu, khumbula ukuzipha amanzi kahle usuku lonke. Phuza okungenani amalitha amabili amanzi ngosuku Futhi lapho uzwa leso silokazana esinesifiso sangaphambi kokufisa, yiba nengilazi yamanzi bese ulinda imizuzu embalwa. Zama ukuzijabulisa ngezinye izinto ukuze ubuchopho bakho buthole isinali lokwanelisa isidingo salo.
Kuyabonakala ukuthi abantu abalele kahle banesikhathi esilula sokwehlisa isisindo. Ngaphezu kokudingeka "ukusetha kabusha" ubuchopho, uphumule umzimba uphinde uthole amandla, ukulala kubalulekile ukugcina isimo somzwelo sinempilo. Uma ungaphilile kahle emoyeni, kungenzeka ukuthi uzizwe ukhathazekile ngokudla usuku lonke.
Sebenza amandla akho okulawula ukukhathazeka ngokudla
Okuthile okubaluleke kakhulu okuvame ukunganakwa umsebenzi ongokomzwelo okufanele wenziwe ngaphambi kokuqala indlela yokunciphisa isisindo noma ushintsho olukhulu ekudleni. Amandla angasebenza, kancane kancane nangokuzivocavoca okuthile. Isibonelo, gwema ukumemezela emimoyeni emi-4 ukuthi usekudleni. Yazi ukuthi kunabantu abane okulindelwe, kuzovivinya ukuzimisela kwakho.
Zakhele izinhloso, imigomo yangempela ongahlangabezana nayo esikhathini esifushane. Zivuze ngokufeza leyo nhlosoThenga incwadi, into ofuna ukuba nayo, kepha gwema imiklomelo edliwayo. Uma unezinkinga zamandla, lokho kudla okuncane okukhona njengokudla ngempelasonto kuzovivinya ukuzithiba kwakho.
Futhi okubaluleke kakhulu, ukudla kuyisidingo. Kufanele udle ukuze uphile, uphile kahle futhi ukwazi ukuphila. Yidla kahle futhi ungalawula ukukhathazeka ukudla.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Amathiphu ezempilo » Ungakulawula kanjani ukukhathazeka ngokudla